१७औं दिनमा केसीको अनसन, रक्तचाप र पिसाबको मात्रा निरन्तर घट्दो, चिकित्सकहरू आन्दोलित - Medianp
१७औं दिनमा केसीको अनसन, रक्तचाप र पिसाबको मात्रा निरन्तर घट्दो, चिकित्सकहरू आन्दोलित
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २५, २०७४१०:४०0
काठमाडौं, २५ साउन । डा.गोविन्द केसीको आमरण अनसन १७औं दिन पनि जारी छ । अनसनका कारण केसीको स्वास्थ्य स्थिति निकै नाजुक भएको र अब जे पनि हुन सक्ने चेतावनी उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा.वाइपी सिन्हाले दिएका छन् ।
शरीरका महत्वपूर्ण अं सञ्चालनका लागि अत्यावश्यकीय इलेक्टोलाइड, रक्तचाप, पिसाबको मात्रा निरन्तर घटिरहेको छ । एकछिन अक्सिजन छुटाउन सकिने अवस्था छैन, मुटुको चाल अनियमित छ । सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली बेखबर देखिएको छ ।
अनशनको चौथो दिन साउन १२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गापीनाथ मैनाली, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ संलग्न वार्ता समिति बनाएको थियो । पछिल्ला तीन दिनमा भने उनीहरू वार्तामै बसेका छैनन् । डा.केसीको मागमा सहमति खोज्न सरकारले १३ दिनबीचमा ६ पटक मात्रै औपचारिक वार्ता गरेको छ ।
१७ दिनदेखि स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको सुधारका आन्दोलन गर्दै आमरण अनशन बसेका डा.केसीको समर्थनमा मुलुकभरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बनेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न संघ–संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले नेपालभरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दबाबमूलक विरोधका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । गोदान सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरूको साझा संस्था हो । बुधबारदेखि मुलुकभरि कार्यरत सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सकहरू हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने संघले जनाएको छ । साथै डा. केसीको जीनवरक्षाका लागि ठोस कदमको पहल नभए सरकारी अस्पतालहरूबाट आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्न संघ बाध्य हुने संघका अध्यक्ष डा.दिपेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
रेजिडेन्ट्स एसोसिएसन अफ न्याम्सले डा. केसीको अनशनमा समर्थन जनाएको छ । मेडिकल शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गरेको आन्दोलनमा सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै उनीहरूले बुधबारदेखि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको बैठकले केसीका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलगायत न्याम्सअन्तर्गत अध्यापन गराइने सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरूमा बुधबार कालोपट्टी बाँधी काम गर्ने, बिहीबार १० बजेदेखि ११ बजेसम्म सेवा बहिष्कार गर्ने र शुक्रबारदेखि शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य गतिविधिहरूमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ ।
मृत तीन बालबालिकाको अनुसन्धान टुंगिएन
साउन २९ गतेभित्रै उम्मेदवारको नाम पठाउन कांग्रेसको निर्देशन